မသက်ဇင်: ရှမ်းလူမျိုးများ လွှမ်း မိုး ကြီး စိုး သော ခေတ်
ရှမ်းလူမျိုးများ လွှမ်း မိုး ကြီး စိုး သော ခေတ်
ပုဂံခေတ် ပထမ မြန်မာနိုင်ငံတော် ပျက်သုဉ်းပြီး နောက် တစ်နယ် တစ်မင်း တစ်တပ် တစ်ဗိုလ် အကွဲ ကွဲ အပြား ပြားဖြစ် ကာ နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး အုပ်ချုပ်ရေး ကာကွယ်ရေး နှင့် ယဉ်ကျေးမှု တို့ အဖက်ဖက် တွင် ဆုတ် ယုတ်ပျက်ပြားနေခဲ့ရသည်။ ယင်း ကာလ ကို ဂျီးအီး ဟာဗီနှင့် ပန်း ဟောလ် အစ ရှိသည့် သမိုင်း ပညာရှင်များ က ရှမ်း လူမျိုး များ လွှမ်း မိုး ကြီး စိုး သော ခေတ် ဟု မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမိုင်းကို ပိုင်းခြား သတ် မှတ် ခြင်း ပြုကြ သည်။
ရှမ်းလူမျိုး များသည် မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ဘက်နှင့် အရှေ့ဘက် တောင်ကုန်း ဒေသ များ တစ်ဝိုက် တွင် အင်အား တိုးတက် ကြီးမား လာ ရုံမျှ မက မြန်မာ နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဒေသ များ သို့ ထိုးဖောက် ၀င် ရောက်ကာ ကျောက် ဆည် လယ်တွင်း နယ် များ ကို အခိုင် အမာ အုပ်စီး ထားမိကြသည်။ ပုဂံပြည် ၏ စီးပွားရေး အုပ်ချုပ် ရေး နှင့် ကာ ကွယ် ရေး အင်အား များ ဆုတ်ယုတ် လျက် ပုဂံမင်း ဆက် ဘုရင်များ ၏ တန်ခိုးအာဏာများ လျော့ ပါးစ ပြု နေ သော အ ချိန် လောက် က ပင် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဒေသများ အထူး သဖြင့် ပုဂံမင်းဆက် များ က စဉ့် ကလျား ဖြစ် သွား သည်နှင့် တပြိုက် နက် ကျောက်ဆည်နယ် မှ ရှမ်းလူမျိုး များ သည် မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ၄င်းတို့၏ တန်ခိုး အာဏာ နှင့် မင်းဆက် ကို ထူထောင်ခြင်း ပြု ရန်ကြိုးပမ်း အားထုတ်ကြသည်။
ပုဂံမင်း ဆက် ဘုရင် နရသီဟပတေ့ ၏ ကျောက်ဆည် လယ် တွင်း နယ်စား မြို့ စား များ ဖြစ်ကြ သည့် သီဟသူ အသခ်ယာ နှင့် ရာဇသက်ြန် အစရှိ သော ရှမ်း လူမျိုး အကြီးအကဲ ခေါင်းဆောင် ၃ ဦးတို့ သည် အင် အား မရှိ တော့ သော ပုဂံမင်း ဆက် နောက်ဆုံး ဘုရင် ကျော်စွာ ကို နန်းချပြီး နောက် ထင်ရှား ကျော်ကြား သည့် မိဖုရား ကြီး ဖွားစော ကို ပင့်ဆောင် ကာ ပုဂံမင်း ဆက် ဘုရင်များ ၏ နေရာသို့ ၄င်းတို့ ကိုယ် ကို အစား ထိုး ရန် ကြိုး ပမ်း အား ထုတ် ကြောင်းတွေ့ ရှိရသည်။
အင်းဝ ကို မြို့တော်ပြု ပြီး မုံရွာ နှင့် ရွှေဘို ခရိုင် ထိ လွှမ်းမိုး ကြီးစိုး ခဲ့ ကြ သော ရှမ်း ပဒေသရာဇ် ဘုရင် များ သည် ပုဂံခေတ် မြန်မာ့ ယဉ်ကျေး မှု အစဉ် အလာ နှင့် အ ဆောင် အယောင်များ ကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်း ခြင်းပြုရုံ မျှ သာ မက ၄င်း တို့ ကိုယ် ကို လည်း အင်းဝ ရွှေနန်း ရှင် အဖြစ် ဖြင့် ခံယူ ထင်မြင် စေခဲ့ ကြောင်း ဂျီအီး ဟာ ဗီ ၏ စာအုပ် တွင် ရေးသား ဖော်ပြ ထား သည်။ ပုဂံမင်း ဆက် ဘုရင် များ ၏ မိဖု ရား ဟောင်း များ နှင့် မောင်းမ မိဿသံ များ ကို ရှမ်း ပဒေသရာဇ် ဘုရင် များ နှင့် အကြီး အကဲ များ က သိမ်းပိုက် ယူ ငင်လိုက်ကြ သဖြင့် ၄င်းတို့မှ ဆင်းသက် ပေါက်ဖွားလာ သော ရှမ်း မြန်မာ သွေးနှော သူများ သည် အင်းဝ ကို ဗဟိုပြုပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဒေသ ကို နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော် မျှ စိုးစံခဲ့ကြသည်။
၄င်း အ ပြင် ရှမ်းမြန်မာ သွေးနှော သော အင်းဝ ဘုရင် များ စိုးစံ ခဲ့ကြ သည့် ကာလ သမိုင်း တစ် လျှောက် တွင် မြန် မာ စာပေ သည် သိသိ သာသာ ကြီး ထွန်းကား ဖွံ့ ဖြိုး ပြီး ပင်းယ ငါးစီးရှင် ကျော်စွာ နှင့် အင်းဝ ဒုတိယ မင်း ခေါင် စသော ရွှေနန်း ရှင်ကြီး များ ကိုယ်တိုင် မြန်မာ စာဆိုတော်ကြီး များဖြစ်နေသည် ကို တွေ့ရှိ ရ သည်။
မြန်မာ ရာဇ၀င် ဟောင်း များ တွင် ကျောက်ဆည် လယ်တွင်းနယ် များ ကို အုပ်စီး ထားမိ ကြ သော အသခ်ယာ ရာဇသက်ြန် သီဟသူ ညီနောင် အကြီး အကဲ ၃ ဦးတို့ သည် ပုဂံမင်း ကျော်စွာ ကို သုတ်သင် ရှင်းလင်းပြီး နောက် ပင်လယ် မက္ခရာမြင်စိုင်း အရပ်တို့ တွင် မင်းပြိုင် ပြုခဲ့ ကြသည်။ အငယ်ဆုံး သီဟသူ သည် နောင် တော် များ ကို လုပ်ကြံ ကာ ၁၃၁၂ ခုနှစ် တွင် ပင်းယမြို့ ကို တည်ထောင် ပြီး လျှင် ၃ နှစ်ခန့်အကြာတွင် ၄င်း ၏ သား တော် အငယ် အသခ်ယာ စောယွန်း အား စစ်ကိုင်မြု့ကို တည်ထောင်ပေးပြီး နောက် မင်းပြိုင် ပြု စေ သည်။
သို့ ရာ တွင် ပင်းယ မြင်းစိုင်း မက္ခရာ နှင့် ပင်လယ် အစ ရှိ သော မြန်မာ နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဒေသ များ ကို စိုးစံ လျက် ရှိကြ သည့် ရှမ်းမြန်မာ ပဒေသရာဇ်မင်း များ သည် မိမိတို့ အချင်းချင်း တိုက်ခိုက် လျက် မည် သည့် အခါ မျှ စည်းလုံး ညီညွတ်ခြင်း မရှိပေ။ ပင်းယ တွင် မင်း ၆ ဆက် စစ်ကိုင်း တွင် မင်း ၇ ဆက် စိုးစံ ကြ ရာ မြန်မာနိုင်ငံ မြောက် ဘက် တလွှား ရှိ မောရှမ်း များ ၏ အကြီး အကဲ သိုချီဘွား က ပင်းယ နှင့် စစ် ကိုင်း ကို ၀င် ရောက် တိုက် ခိုက်ပြီး လူသူ အမြောက်အများ ကို ကျွန်ပြု ဖမ်းဆီး ယူဆောင်သွား သဖြင့် ပင်း ယ နှင့် စစ်ကိုင်း မင်း ဆက် များ ပျက်စီး သွား ရပြီး လျှင် ယင်း ဒေသ တစ်ဝိုက် တွင်ရှိကြ သော မြန်မာလူမျိုး အမြောက် အများ သည် တောင်ငူဘက် သို့ ပြောင်းရွှေ့ ထွက်ပြေးကြသည်။
ယင်းသို့ မြန်မာ ရာဇ၀င်များ ရေး သား ဖော်ပြ ချက် ကို လေ့လာ ကြည့် လျှင် ပင်းယ နှင့် စစ်ကိုင်း မင်း ဆက် များ ပျက်စီး သွားကြ သည့် သက္ကရာဇ် ၁၃၆၄ ခုနှစ် ထိ ကျောက်ဆည် လယ်တွင်း နယ် များ ကို အုပ်စီး ထား ကြ သော ရှမ်း မြန်မာ ပဒေသ ရာဇ် မင်း များ နှင့် အကြီး အကဲ များ သည် မြန်မာ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ လုံး ကို စည်း လုံး သိမ်း သွင်း နိုင်ဖို့ ဝေးစွ မြန်မာ နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဒေသ တစ်ဝိုက် ကို ပင် စည်းလုံး သိမ်းသွင်း ခြင်း မပြုနိုင် ပဲ မိမိတို့ အချင်းချင်း တိုက်ခိုက် လုယက် နေကြ သည် ကိုသာ တွေ့ရ သည်။
ဆက်လက် ပြီး မြန်မာရာဇ၀င် များ တွင် မောရှမ်းများ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်သဖြင့် စစ်ကိုင်းနှင့် ပင်းယ မင်း ဆက် များ ပျက်စီး သွား သော အခါ ရှမ်းမြန်မာ အကြီးအကဲ တစ် ဦးဖြစ်သူ သတိုးမင်းဖျား သည် ကျောက် ဆည် လယ် တွင်းနယ် များ ကို ဖြတ်သန်း စီးဆင်း သည့် ဇော်ဂျီ စမုံမြစ် ပန်းလောင်းမြစ်နှင့် မြစ်ငယ်မြစ် ဧရာဝတီမြစ် တို့ ဆုံ ဆည်းမိသည့် အကွက်အကွင်း ကျသောဒေသတွင် အင်းဝမြို့ ကို စတင် တည် ထောင်သည်။
တစ်နယ် တစ်မင်း ဖြစ်နေ သည့် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဒေသ ကို တဖြည်းဖြည်း စည်း လုံး သိမ်းသွင်း ကာ အင်း ၀ မင်းဆက် ကို ထူထောင်ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ ကို စည်းလုံး သိမ်းသွင်း ဖိုကြိုးပမ်းရာ တွင် သတိုးမင်းဖျား သည် အ ရည်း ကြီး ရှင်ယောင် များ အား သုတ်သင် ပုံ သူခိုးကြီး ငတက်ပြား အား ဖမ်းဆီး ပုံနှင့် ဓါးပြ တစ်ဦး အား သတ် ဖြတ်ပြီး နောက် အလောင်း ၏ ရင်ဘတ်ပေါ် တွင် ထမင်းစားပြပုံ များ ကို မြန်မာ ရာဇ၀င် များ တွင် ဖွဲ့နွဲ့ ရေးသား ဖော် ပြကြသည်။
သို့ ရာ တွင် မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ဘက် တစ်လွှား ရှိ မောရှမ်း များ ကို ကား စည်းလုံး သိမ်းသွင်း နိုင်ခြင်း မရှိ သေး ချေ။ ယင်းသို့ မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ဘက် တစ် လွှား တွင် မောရှမ်း များ သည် တန်ခိုး အင်အားကြီးမား လျက် ၄င်း မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဒေ သ တ ၀ိုက် တွင် အင်းဝ ကို ဗဟိုပြုသည့် ရှမ်းမြန်မာ ပဒေသရာဇ် မင်းဆက် သည် တစ်စ ထက် တစ်စ တန်ခိုး အင် အားကြီး မား လျှက်ရှိ နေကြချိန် တွင် မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ဘက် တစ်လွား ၊ အ ထူး သဖြင့် တနသ်ာရီ ကမ်းရိုး တန်း တစ်ဝိုက် တွင် တောင်ပိုင်း ယိုးဒယားရှမ်းများ ၏ တန်ခိုး အာဏာ သည် လည်း တစ်ဖြည်းဖြည်း လွှမ်းမိုးစ ပြုလာ သည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
ရှမ်းခေတ်။ ဂျီအီးဟာဗီ ။ပန်း။ ဟောလ်။
Posted by မသက်ဇင် at 11:38 AM
ကျောက်ဆည်နားတ၀ိုက်မှာ မြင်စိုင်းမှာ အခုထိ ရှမ်းရွာတွေ ရှိတယ်ဗျ။ ရှမ်းတောင်ဦး၊ ရှမ်းရွာကြီး စတဲ့ ကုလားကျောင်းရွာ နားတ၀ိုက် မြင်သာတောင်ခြေတွေမှာ ပြန့်ကျဲနေတုန်းပါ။ နေပျော်စရာကောင်းပြီး အလှူအတန်း ရက်ရောကြတယ်ဗျ။ သွားကြည့်ပြီးလေ့လာသင့်တဲ့ နေရာတွေပါဗျာ။ ကျွန်တော် ၁လ၊ ၂လလောက်နေခဲ့ဖူးတယ်ဗျ။
အရမ်း စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးပါ အစ်မ။ မြန့်မာ့သမိုင်းမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံး ကာလ တစ်ခု လို့ ထင်ပါတယ်။ နတ်ကိုးကွယ်တဲ့ မောရှမ်း တွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မင်ရှမ်းတွေ ရယ်လို့ ကွဲ ပြားတယ် ဆိုပြီး ဖိုရမ် တစ်ခုမှာ ဖတ်ဘူးပါတယ်။ သိုဟန်ဘွားက မောရှမ်း ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ အင်္သခယာ ရာဇသင်္ကြန် သီဟသူ တို့က မင်ရှမ်း တွေ ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ပုဂံခေတ် နဲ့ အင်းဝ ခေတ်ကြား က သမိုင်းကို ကျနော်တော်တော် စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ မြင်စိုင်း ဆိုတာရောပေါ့။ ဆက်ရန် ဆိုတာလေး တွေ့လို့ နောက်ပို့စ်ကို ကျနော် စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
မသက်ဇင်ရေ ရှေ့လာမယ့်ပို့စ်တွေကို စိတ်ဝင်စားလာပြီ။ ဆက်ရန်ကိုမျှော်နေမယ်။
Very informative post, I think.
Well, I believe Shan and Mon are great people in history. I have no idea why Burmese occupy shan territory these days Maybealegacy of British. I would support Shan independence.
မမရေ.. ဗဟုသုတအလွန်ရတဲ့ ပို့စ်ကောင်းလေးဖတ်ရ
လို့ကျေးဇူးပါ မမ ရေ.. ဆက်ရန်မျှော်နေမယ်နော်။
ကျေးဇူးပါမသက်ဇင်ရေ ၊၊ ပုံမှန်အတိုင်းပါပဲ ၊၊ ဗဟုသုတ တွေလာယူသွားပါတယ် ၊၊ သတိရပါတယ်ဗျာ ၊၊ အလုပ်များလို့ မရောက်ဖြစ်တာပါ ၊၊
အစ်မရေ မသိသေးတာတွေ ဖတ်မှတ်သွားပါတယ်ဗျာ
တစ်ကယ့် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်
ဆက်ရန်ကို မျှော်နေမယ် အစ်မရေ
အစ်မရေ..ကျွန်တော်တို့ကို သမိုင်းနားဝင်အောင် ဖြည်းဖြည်းခြင်း ပြောပြောပြနေတာ ကျေးဇူးပါဗျာ..
တီတီဇင်ရေ.. တကယ်တော့ မက်မက်အမေက ရှမ်းမ အစစ်...
အဖေက တော့ အိန္ဓိယစပ်တဲ့ ကပြား... မက်မက် တို့က တော့အဖေဘက် သွေးပါသွားတယ်။ကြည့်လိုက်ရင် ရှမ်းလို့ မထင်တော့ဘူး..
ဟီးဟီး.. ကုလားမနဲ့ တူတယ်...ဘယ်နေရာမှာပဲ ရောက်ရောက်လေနော်..
လူတွေ ရဲ့ သွေးဗီဇမှာ အမျိုးဂုဏ်တော့မပျောက်ဘူးတီတီရေ... ရှမ်းသွေးတော့
တစ်ဝက်ပါတယ်.. ဟဲဟဲ.. ရှမ်းပြည်မှာ နေ ရှမ်းသွေးပါပေမယ့်
အဲလို ရှမ်းလူမျိုး တွေ ရဲ့ သမိုင်းအကြောင်း ကိုမသိဘူး...
ရှမ်းလူမျိုးအကြောင်း လေးကို သိလိုက်ရတယ်။
ဗဟုသုတ တွေ အများကြီး၇တယ်တီတီဇင်ရေ..
ဒါပေမယ့် ဖတ်လို့ကောင်းနေတုန်း မီးပျက်သွားတယ်.. ဟွန့်..လူဆိုးတီတီဇင် :P :P
ဆက်ရန်တဲ့... မျော်နေမှာနော်.. မြန်မြန်လေး...:) :)
ဆင်ဖြူရှင် ဘုရင် သီဟသူ ဆိုတာ ဒီ သီဟသူလား၊ သူ့ကို တစီးရှင် သီဟသူလဲ ခေါ်တာ ဖတ်ဖူးတယ်။ နောက်ပြီး ပင်းယ နောက်ဆုံးမင်း ဥဇနပြောင် ပြီးမှ စစ်ကိုင်းမင်း သင်္ခယာစောယွန်း တဆင့်ပြီး တဆင့်လာတာလား။ ဒါမဟုတ် ပင်းယ တစ်မင်း၊ စစ်ကိုင်း တစ်မင်း ဆိုပြီး မင်းပြိုင် အုပ်ချုပ်တာလား၊ အမ
စိတ်ထဲမှာ မရှင်းလင်း ဖြစ်နေလို့ မေးကြည့်တာပါ။
သမိုင်းအကြောင်းတွေ ဖတ်ရတဲ့ အခါမှာ တော်ရုံတန်ရုံ လူရေးတာ ဆိုရင် သမိုင်းကြောင်းတွေ ကြားမှာ အီသွားတက်ပါတယ် အမက သမိုင်းကြောင်းလဲ ခိုင်လုံအောင် လိုရင်းလဲ ရောက်အောင် မအီအောင် ပီပီ
ပြင်ပြင် ရေးသားနိုင်စွမ်းရှိတာကို တွေ့ရပါတယ် လေးစားပါတယ် အမရေ ဒီလိုအကျိုးပြုပို့စ်လေးများကို
ဗဟုသုတရတဲ့ ပိုစ့်တစ်ခု ဖတ်သွားတယ်။ ရှမ်းလူမျိုးဟာ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ အတော်ပါဝင် ပက်သက်နေတယ်လို့တော့ ခံစားမိတယ်။ အသေအချာကတော့ မသိသလောက်ပဲ။ ဆက်လက်ဝေမျှမယ်လို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။
11:31 PM PST
ရှမ်းပြည်မှာမွေး၊ ရှမ်းပြည်မှာနေ၊ ရှမ်းပြည်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့ပေမယ့် ဒီလို သမိုင်းကြောင်းရှိခဲ့တယ် ဆိုတာကို အမှန်မသိတာပါ။ မသိဆို မှတ်တမ်း တင်ထားတာလည်း မရှိ၊ ဖတ်စရာ စာအုပ်လည်း မရှိခဲ့တော့ မသိတာပါ။ ကိုးကားထားတဲ့ စာအုပ် ကိုကြည့်ပြန်တော့လည်း ဒီကပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရေး ထားတာမဟုတ်တော့ ပိုဆိုးပေါ့။ ရှမ်းစာတွေ ရှိပေမယ့် များသောအားဖြင့် ပုံပြင်တွေ နဲ့ ဘုရားသမိုင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ရေးထားတာတော့ မတွေ့ဖူးပါဘူး။ မျှဝေပေးတဲ့ အတွက် တကယ့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဆက်ရန်ကို မျှော်လက်ပါ။
11:55 PM PST
အမသက်ဇင်ရေ စိတ်ဝင်စားစရာ အလွန်ကောင်းတဲ့ပိုစ့်လေးတစ်ပိုဒ်ပါပဲ။ သိတောင်မသိခဲ့ဘူးရှမ်းလူမျိုးတွေ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ မောင်လေးမကြားဘူးဘူးအမ
12:53 AM PST
အစ်မရေ အလုပ်နဲ့ ကျောင်း အချိန်လုနေရလို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ သမိုင်းအကြောင်းကို တကူတက မလေ့လာဖြစ်ခဲ့တာ အတော်ကြာပေါ့။ အခုလို တကူးတက အချိန်ပေးပြီး ရေးသားပေးတဲ့ အစ်မတို့ ရှိတဲ့အတွက် အချိန်က မအအောင် သင်ခဲ့ရတဲ့ သမိုင်းကို ပြန်ပြီး စပ်ဟပ်မိတာပါ။ အသစ်တင်တိုင်း လာဖတ်ဖြစ်အောင်ကို ဆွဲဆောင်မှု ရှိတာကိုတော့ ၀န်ခံပါရစေ။ အတိတ်သမိုင်းကြောင်းကို တူးဖော်ပြီး သိသင့်တာလေးတွေ ဝေငှပေးနေတဲ့ အစ်မ နောက်ထပ်ဒီလို တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့ စ်တွေအများကြီး ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေဗျာ။
2:08 AM PST
အမဟာ သမိုင်းတော်တော်ကျေတာလား ဗဟုသုတ တော်တော်စုံတာလား၊ အရမ်းအကျိုးရှိတဲ့ စာတွေပါဗျာ။ အားရလိုက်တာ။ တပြိုင်ထဲ အားပါငယ်သွားတယ်။ :(
4:45 AM PST
အစ်မစာတွေဖတ်ရမှပဲ သိတော့တယ် ။ အရင်ကတကယ်
ကို မသိခဲ့တာ ရှမ်းလူမျိုးတွေ ကျယ်ပြန့် ခဲ့ကြောင်း ။
အခုလို ရှာဖွေတင်ပြပေးတာကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်
။ဆက်ရန်ကိုလည်း မျှော်နေပါတယ် ။ အဆင်ပြေပါစေ
အစ်မရေ. ။ စာကောင်းပေမွန်များ ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါ
သိထားသင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ သိခွင့်ရတာကျေးဇူးပါ တကူတကလိုက်ရှာဖတ်ဖို့မလွယ်တဲ့ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ တစ်စေ့တစ်စောင်းဆိုပေမဲ့ ဗဟုသုတအတွက် အဟာရတွေပါ စောင့်မျှော်ဖတ်ပါ့မယ်။
ဗမာ့သမိုင်းမှာ ရှမ်းတွေ ပတ်သက်နေတာတော့ သိထားပြီး ဒီလောက် ထဲထဲဝင်ဝင် ဖြစ်နေတာကို Point of view ဖြစ်အောင် ထောက်ပြနိုင်လို့ လေးစားရပါတယ် အမ သက်ဇင်။
8:11 AM PST
လာလည်ဖတ်ရှုသွားပါတယ်၊ comment တွေများလို. ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ပါ၊ ဆက်ရန်ကိုမျှော်နေပါတယ်၊ သမိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်၊ သခင်သန်းထွန်းပြောတာလားတော့မသိဘူး၊ ဘာလို.သမိုင်းသင်ရသလဲလို.မေးတော့ မ,အ အောင်လို.တဲ့။ ခင်မင်လေးစားလျက်.....
အမရေ..ရှမ်းလူမျိုးများ လွှမ်း မိုး ကြီး စိုး သော ခေတ် ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရဖို့ မလွယ်ဘူးဆိုတာသိသွားတယ်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ စာကိုးကျမ်းကိုးတွေကနဲတာမှ မဟုတ်တာ။ ဒါတွေအားလုံးကို ဖတ်ပြီးမှ စာဖတ်သူခေါင်းထဲ လွယ်လွယ်ဝင်အောင် ရေးထားနိုင်တာကိုက အင်မတန်ပဲ အတုယူလေးစားဖွယ်ပါပဲ။
9:41 AM PST
အစ်မရေ အခုလိုမျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
ဗဟုသုတအများကြီးရပါတယ်..။ သမိုင်းကို သေသေချာချာ လေ့လာထားရမှာဘဲ....။ စိတ်ဝင်စား တယ်...ဆက်ရန်ကိုလည်းမျှော်နေပါတယ်...။
ဟုတ်လား မှားတဲ့အခါလည်း မှားပေမပေါ့ ဟီး
ရှမ်းတွေ ပုဂံမှာ ဘုရင်လုပ်ခဲ့ကြောင်းအခုမှသိတော့တယ်
ကျေးဇူးဘဲ အမရေ အခုလိုသမိုင်းကြောင်းလေး တင်ထားပေးတဲ့ အတွက်ပါ
thorn musem said...
ခုလိုပင်ပင်ပန်းပန်း ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ပေးတာကို ကျေးဇူး
ကျနော့်အမေက ရှမ်းတိုင်းရင်းသူဆိုပေမယ့် ...
ဘာမှ ကိုယ့်မျိုးရိုးအကြောင်းကို သေချာမသိခဲ့ပါဘူး...
ကိုယ်တိုင်ကလဲ မပြည့်စုံတဲ့ ကျောင်းပြဌာန်း သမိုင်းကိုသာသင်ဘူးခဲ့တာပါ...။
အရင်ကစဉ်းစားဘူးတယ်...ရှမ်းအမျိုးသမီး အမေက ဘာဖြစ်လို့ တောင်ကြီးရှမ်းပြည်ဘက်မှာ မဟုတ်ဘဲ...တောင်ငူဘက်ရောက်နေတာလဲလို့ ပါ..။
အခုတော့ ကျောက်ဆည် အဆက်နဲ့ တောင်ငူဆိုတော့ ဆက်စပ်လို့ ရသွားပါပြီ...ဒီအသက်အရွယ်ထိ မသိခဲ့ တဲ့ ကွင်းဆက်ကို မသက်ကြောင့် သိလိုက်ရလို့ ကျေနပ်သွားသလို မသက်ကို ကျေးဇူးအများကြိးတင်ပါတယ်။
မသက်ဇင်ရေ... သမိုင်တွေဖေါ်ထုတ်ပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါ။
အင်း ရှမ်းမင်းသားက ဆက်ရန်မှာပါမှာထင်တယ်နော်.. လုပ်ပါအုံး အားလုံးဖတ်လို့ရတာပေါ့။
မြန်မာပြည်မှာ ရှမ်းလူမျိုးတွေလွှမ်းမိုးခဲ့ပုံကို ဖတ်ခဲ့ပါတယ်...။ဗဟုသုတ စုံရပါတယ်...။
ပို့စ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ စာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်ရမယ်ဆိုတာ လူတိုင်းနားလည်ကြပါတယ်...မသိတဲ့သမိုင်းကို လူတိုင်းကို
5:54 AM PST
အစ်မရေ ဒီလို ဗဟုသုတပေးတဲ့ပို့စ်ကိုတင်ပေးလို့
Shan should have their indepence while keepingaclose relationship with Myanmar. Like England and Scotland where it has got its own parliament.
တကယ်တော့ လူမျိုးတိုင်းဟာ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ တစ်နည်းတစ်ဖုံဆီနဲ့ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ အရေးပါခဲ့ကြတာချည်းပါ။ ဗမာနိုင်ငံမှ မဟုတ်ဘဲ။ မြန်မာနိုင်ငံပါ။ ဗမာလူမျိုးရဲ့ သမိုင်း တစ်ခုတည်းနဲ့တင် မြန်မာ့သမိုင်းကို ရေးလို့ မရပါဘူး။ ကျနော် သမိုင်းကို သိပ် စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ အခုလို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဆွဲထုတ်ပြတာ အရမ်း ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ဆက်ဖတ်ဖို့လည်း မျှော်နေပါ့မယ်။ အဲဒီလို ရှားပါး သမိုင်းစာအုပ်ကောင်းလေးတွေ အီးဘွတ်ရှိရင်လည်း ညွှန်ပေးပါဦး။
6:14 PM PST
ရှေးမြန်မာကြီးတွေအကြောင်းလည်းသိချင်ပါသေးတယ်။ ဆရာကြီးစစ်ကိုင်းဦးဖိုးသင်းကတော့ မြန်မာထီးနန်းအစ မင်းတုန်းမြို့ကဖြစ်ကြောင်းခိုင်ခိုင်မာမာပြောခဲ့ဖူးတယ်.. ဒါပေမယ့်(ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးသမျှ) သမိုင်းတွေထဲမှာတော့ မတွေ့မိဘူး..
ရှမ်းဆိုလို့ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှမ်းလူမျိုးလို့ ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတွေအကြောင်းရယ်...နောက်ပြီးဘယ်လိုကနေဘယ်လို
ရှမ်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အကြောင်းရှမ်းလူကြီး တစ်ယောက်ပြောတာ မှတ်သားဘူးပါတယ် ခင်ဗျာ..
ယခုနှစ်အတွင်းမှာ မြန်မာပြည်နယ်စပ် တရုတ်ပြည်နယ်မှာ ရှမ်းလူမျိုး အစည်းအဝေးကို
ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ကြားသိရပါတယ် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှိသမျှ ရှမ်းလူမျိူးများ နိုင်ငံအသီးသီးမှ တက်ရောက်ခဲ့တယ်..ရှမ်းလူမျိုးပေါင်း သန်း 100 ရှိတယ်လို့ မှတ်သားရပါတယ်ခင်ဗျာ
အမ..အနေနဲ့ ဆက်လက်ပြီးရေးသားပေးပါဦးလို့ 
blog လောကမှာသိပ်လည်လည်ဝယ်ဝယ်မရှိသေးလေတော့..ကိုယ်စွဲစွဲမြဲမြဲ ဖတ်ရမယ့်blog လေးတွေကို..ရှာဖွေနေရတုန်းပေါ့..။အခု..နောက်ဆုံးတင်ထားတဲ့ပိုစ့်ကို..အရင်ဆုံးဖတ်သွားပြီး..၊ နောက်လဲ..အမြဲကို..လာရတော့မှာ..။
12:18 AM PST
မမရေ..နောက်တစ်ပိုင်းကို မျှော်နေပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်းတွေ ဖတ်ရတော့ စာပြန်နွှေးသလိုပဲ ဗဟုသုတတွေလည်း ရပါတယ်...
7:50 PM PST
8:50 AM PST
မသက်ဇင်ရေ စာတွေလာဖတ်သွားတယ်နော့် ရှမ်းညီနောင်သုံးဦး ပြိုကွဲနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်စုစည်းတယ်ဆိုတာတော့ သုံးတန်းတုန်းကလားမသိဘူး တခါသင်ဖူးတာတော့ မှတ်မိပါတယ်။ သမိုင်းကို စိတ်ဝင်စားပေမယ့် အထက်တန်းကျောင်းမှာတုန်းက သိပ္ပံအတွဲက ဘာသာတွေပဲ ယူဖြစ်လို့ သမိုင်းနဲ့ ကင်းကွာသွားတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ ကိုလိုနီခေတ်နဲ့ လွတ်လပ်ပြီးကာလ သမိုင်းကလွဲပြီး အရင်ကသမိုင်းတွေကို မလေ့လာဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အခုလို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗမာမဟုတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သမိုင်းကို လေ့လာပြီး မျှဝေပေးတာ သိပ်ကိုကောင်းပါတယ် မသက်ဇင်။ တခြားတိုင်းရင်းသားတွေအကြောင်းလည်း လျဉ်းသင့်ရင်သင့်သလို လေ့လာပြီး တင်ပြနိုင်ရင် ပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ အားပေးနေပါတယ်။
3:55 PM PST
မသက်ဇင်ရေ... ကောက်နှုတ်ချက်တွေ အင်မတန်ကောင်းတယ်ဗျာ... သစ်လွင်နေတဲ့ သမိုင်းတစ်ခုလိုပါပဲ .. အခုမှ ပြည့်စုံစွာသိရတယ်... တန်ဖိုးရှိတဲ့စာပေတွေကို ရေးတတ်တဲ့..မသက်ဇင်ကို လေးစားလျှက်ဗျာ........
2:31 AM PST
Very interesting post, love it.
၇ှမ်းပြည်နယ်ကနှီးဘု၇ားသမိုင်းနဲဓါတ်ပုံတွေလိုချင်ပါတယ်..ကျေးဇူးနော်( http://konaingoo.blogspot.com/ )
8:31 PM PST
Please also visit the following blog.
mokkham mokkham said...
သျှမ်းအကြောင်းတွေစိတ်ဝင်စားရင် http://shannilay.blogspot.com/မှာဖတ်ပါခင်ဗျာ ဖေ့ဘုတ်မှာကျွန်တော့်အကောင့် mokkham sai ကိုအက်ပြီးသိလိုတာမေးနိုင်ပါတယ်
မောသျှမ်းတွေနတ်မကိုးကွယ်ပါဘူးခင်ဗျာ မောသျှမ်းတွေဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာအခုနှစ်ပေါင်း၂၁၀၉ခုရှိပါပြီသျှမ်းအကြောင်းတွေစိတ်ဝင်စားရင် http://shannilay.blogspot.com/မှာဖတ်ပါခင်ဗျာ ဖေ့ဘုတ်မှာကျွန်တော့်အကောင့် mokkham sai ကိုအက်ပြီးသိလိုတာမေးနိုင်ပါတယ်